Photography – ICT.com.mm
GoPro HERO10 BlackK1,128,000
Panasonic H-HS043E Lumix Lens (Silver)K701,000
Panasonic H-FS1442AE Lumix Lens (Black)K257,000
Panasonic H-H025E (Silver) Lumix Lens (Silver)K316,000
Panasonic H-H025E Lumix Lens (Back)K316,000
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Photo: 23MP Video: Video 5.3K60, 4K120 + 2.7K240 Wide FOV Built-In Mounting with Folding Fingers HERO10 Black Mods Compatibility 3.5mm Audio Mic Input with Media Mod for...
Panasonic H-HS043E Lumix Lens (Silver)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Focal Length: 42.5mm / 85mm (35mm camera equiv.) Aperture: F1.7 Filter Size: φ37mm / 1.5inch Lens Construction: 10 elements in 8 groups (1 aspherical lens) Mount: Micro...
Panasonic H-FS1442AE Lumix Lens (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Focal Length: 4-42mm / 28-84mm (35mm camera equiv.) Maximum Aperture: F3.5(Wide) - F5.6(Tele) Filter Size: φ46mm / 1.8 inch Lens Construction:9elements in 8 groups (2...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Focal Length: 25mm / 50mm (35mm camera equiv.) Aperture: F1.7 Filter Size: φ46mm / 1.8inch Lens Construction: 8 elements in7groups (2 aspherical lenses, 1...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Single focal length lens Ultra-fast F1.7 aperture Construction: 8 elements in7groups (2 aspherical lenses, 1 UHR lens) Magnification 0.14x Images with incredible clarity Compact and...
Panasonic DMC-FT30 Lumix Camera (Orange)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 16.1 MP sensor Water resistant up to 8 meters, shockproof to 1.5 meters, frost resistant to-10° and dust resistant 25 mm-ultra wide angle lens with4x...
Panasonic DMC-FT30 Lumix Camera (Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Camera Effective Pixels: 16.1 Megapixels Aperture: F3.9 - 5.7 / 2-step (F3.9 / 9.0(W), F5.7 / 13.0(T)) Intelligent Zoom: 8x Lens: LUMIX DC VARIO Lens: 11 elements...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ TYPE Type: Digital Single Lens Mirrorless camera Recording media: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card Recording media: (Compatible with UHS-I UHS Speed Class 3...
Canon Powershot G7 X Mark III (Silver)-26
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Digital camera with built-in flash, 4.2x Optical, 4x Digital and 17x Combined Zoom with Optical Image Stabilizer Total Pixels: Approx. 20.9 megapixels Effective Pixels: Approx. 20.1...
Kase Fashion2in 1 Lens Kit
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Contain : Wide Angle Len, Macro Len Wide Angle Lens: Great for catching all the action! Enhances your device's camera to get the wide shot you need....
Kase Fashion4in 1 Lens Kit
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Contain : Wide Angle Len, Fish Eye Len, Macro Len, Telephoto Len Wide Angle Lens: Great for catching all the action! Enhances your device's camera to get...
Kase Fashion Lens3in 1 (Pink)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။3in 1 lens Kit includes 0.6X Wide angle 0.33x Fisheye 15x Macro Travel Case Clip Mount Cleaning cloth Includes wide angle, fish eye and macro lenses...
Kase Fashion Lens3in 1 (Red)